Victoria: Tarkaanfii Qoqqobbii Laaffisuu marroo Sadaffaa – Oromedia
Mootummaan Victoria Sa’aa 11:59 halkan Dilbata, 9 Sadaasa (November) bara 2020 iraa eegalee, qoqobbiileen baadiyaa Victoria fi magaalaa Melbourne keeysa turan/jiran ilaalchisee qajeelfamoota armaan gadii dabarsee jira.
Yeroo kana irraa eegalee :
Sababa kamiif illee mana kee irraa deemuu dandeessa.
Fageenya deemuu qabdu irra qoqqobbiin hin jiru. Victoria keessa bakka kam illee deemuu dandeessa. Hayyama si hin barbaachisu.
Haguuggoo/ Mask sitti tahu ufatu qabda yaroo manarraa deemtu, yoo sababa seerawaa tahe kan hin uffanneef qabaate malee.
Haga nama 10 gautti allatti wal gahuun ni danda’ama, namoonni 10 ol warra tokkorraa kan ta’an wallitti dhufuun ni danda’ama. Kuniis alatti iddoo oolamayaa kan akka (Park) yokaa handaara bahar (beach) tahu qaba. Garuu aluma mana jireenya keeti tahuun qabu.
Mana keetti keessummoota si dubbisan lama tarii qabaatuu malta. Namootni lamaan si dubbisuu mana kee dhufan tarii warra gara garaa lama irraa tahuu danda’u, kan kunuunsanis of faana fidanii dhufuu danda’u. Keessummootni lamaan tarii sa’aa adda addaatti si dubbisuu dhufuu danda’u.
Victoria keessa bakka qubsumaa (accommodation) qabattee boqonnaaf deemuu dandeessa. Namoota waliin jiraattu, jaalalloo kee, yookaan hanga namoota lamaa fi ijoollota isaanii, yookaan kanneen isaan kunuunsa kennaniif fi isaan biraas hafuu hin dandeenye yookaan bakka biroo kunuunsi itti kennamuuf kan hin qabne waliin bakka qubsumaa (accommodation) waliin hirmaatuuf qabatuu dandeessa.
Gabaaleen, hojattooni bareedina rifeensaa, bakkeen rifeensa itti ciran fii maneen bareedina (salooniin) banaadha (haguuggoo fuulaa ufatamu qaba), karoora COVIDSafe irrati hundaawa
Manni nyaataa, manni dhugaatii fi manni bunaa ala keessatti namoota 70 fi mana keessatti hanga namoota 40 baay’ina gurmuu namootaa fi teessuma jiru irratti hundaawee keessummeessuuf banaa tahuu danda’a.
Baay’ina waliigalaa keessummootaa irratti hundaawee bakki nyaataa gabaa keessaa (food court) banaa dha.
Sochiin qaamaa mana keessaa namoota gudguddaaf, jiimii fi leenjii kutaa keessaa dabalee hanga namoota kudhanii itti fufuu danda’a. Bakki daakaa ala yoo baay’ate namoota 50 fi mana keessa namoota 20f banaa dha.
Isportii fi bakki bashannanaa mana keessaa kan qaamaan wal-xuqa hin qabne namoota umriin dhalootaa 18 fi sanii gadi taheef itti fufa. Hanga namoota 20 isportii waliin xabachuu ni danda’an. Biratti argamnaii ilaaluuf warra yookaan guddisee tokko qofatti murtaawe.
Walfuudhi hanga namoota 10 qabaatuu danda’a (namoota ragaa tahan lama dabalatee). Warra wal fuudhan lameen, kan sirnicha gaggeessu fi fakkoo (photo) kan fuudhu lakoysi kun hin dabalu. Walfuudhii mana keettitti, yokaa bakka dhuunfaatti gaggeessita yoo tahe qoqqobbiin kennamu ni jira.
Sirni awaalchaa mana keessatti hanga namoota 20 fi mana keessaa alatti namoota sirna awaalaa gaggeessan dabalee hanga namoota 50 qabaatuu danda’a. Qoqqobbiin kun daa’imman baatii 12 gadi tahan hin dabalu.
Waaqeffannaaf alatti walitti qabamuu fi awaalchaaf hanga namoota 50 fi gaggeessaa amantii ni danda’ama.
Gorsa fayyaa ummataa irratti hundaawee. Dilbata, Sadaasa (November) 22 bara 2020 dura Victoria Tarkaanfii Xumuraa irra geessi jedhamee eegama.
Bakki bareedinaa (beauty) fi tajaajila dhuunfaa (personal services) bakka namootni tajaajilaaf dhufan haguuggoo fuulaa itti of irraa baasanii tajaajilamuu danda’ aniidha.
Manni nyaataa fi manni bunaa gartuu heddummatan keessummeessuuf banaa tahuu danda’an.
Nageenya eeggachuu irratti hundaawee bakki ispoortii hundi itti fufu.
Hanga baay’ina namootaa irratti hundaawee bakki kadhannaa ummataa banaa tahu (lakoysa namootaa bakkichatti qabaatuu dandeessu).
Walfuudhi hanga namoota 100 qabaatuu danda’a. Mana keettit walfuudha gaggeessita yoo tahe lakoysi namootaa adda taha.
Sirni awaalchaa hanga namoota 100 qabaatuu danda’a. Qoqqobbiin kun namoota sirna awaalchaa gaggeessan yookaan daa’imman baatii 12 gadi tahan hin dabalu. Sirni awwaalchaa kun mana keetti gaggeessama yoo tahe qoqqoobbii addaa qabaata.
COVID Sirreessuu (COVID Normal): gorsa fayyaa ummataa irratti hundaawa.
Dhibeen coronavirus (COVID-19) amma illee nu irraa hin deemne, saphlaatti deebi’ee babal’achuu (facahuu) danda’a. Nageenya maatii fi hawaasa keenyaa eeguuf nuti hundi waan nu irraa eegamu godhchuu qabna.
Nagaan turuuf waan ati saphlaatti godhtu kunoo ti:
Harka kee saamunaa fi bishaaniin yoo xiqqaate sekondi 20f dhiqadhu.
Yeroo mana kee irraa deemtu haguuggoo fuulaa siif tahu kan afaan fi funyaan kee haguugu uffadhu.
Mana yaalaa deemii ilaalami.
Yoo dhukubde mana turi. Maatii dubbisuu yookaan dalagaa hin deemin.
Yoo mallattoo dhukubaa qabaatte deemii laalami, gara manaatti deebi’i.
Dhibee dhukubaa laalamtee hanga itti-baha isaa eegattutti galii maallaqaa dhabuun yoo si yaaddesse gargaarsa Lalamuu Adda Of-baasuu (Test Isolation) coronavirus (COVID-19) argachuuf gahaa ni taata. Kunis akka ati mana ittiin turtuuf si gargaara.
Yoo qofummaan sitti dhagahame Toora Gargaarsa Bilbilaa Coronavirus (Coronavirus Hotline) 1800 675 398 irratti bilbilii lakoysa (3) xuqi. Nama afaan siif hiiku yoo barbaadde lakoysa duwwaa (0) xuqi. Tola-ooltota (volunteer) Australian Red Cross kan tajaajila naannoo waliin wal si agarsiisanitti bilbili kun wal si qunnamsiisa.
Deeggarsa $450 qorannoo Vaayirasii Koronaa (COVID-19)’f kennamu – $450 Coronavirus (COVID-19) testing support (PDF)
Kafaltii Hojii Hafuu Dhibee Daddabraa $1500 – $1500 Pandemic Leave Disaster Payment (PDF)
Namni hundi kan umriin 12 fi sanii ol tahan yeroo mana irraa ala deeman yoo sababa seerawaa tahe qabaatan malee haguuggoo fuulaa kan funyaan fi afaan isaanii sirriitti hguugu uffachuu qaban. Fakkeenyaaf:
Haguuggoo fuulaa kan funyaan fi afaan kee haguugu siif tahu uffachuu qabda. Kan fuula haguugu (shields) cittuu huccuu (bandanas), yookaan maratni (scarves) ofii isaaniitii fuula haguuguuf gahuu tahuutti hin fudhataman.
Nama KOOVID-19 qabu waliin yoo tuxxuqqii dhiyeenyaa qabdu ta’e maal akka gootan – What to do if you have been in close contact with someone with coronavirus (COVID-19) (Word)
Nama KOOVID-19 qabu waliin yoo tuxxuqqii dhiyeenyaa qabdu ta’e maal akka gootan – What to do if you have been in close contact with someone with coronavirus (COVID-19) (PDF)
Yoo dhibee vaayirasiikoronaa (KOOVID-19)’n qabamtanii ta’ee maal akka gochuu qabdan – What to do if you’ve tested positive for coronavirus (COVID-19) (Word)
Yoo dhibee vaayirasiikoronaa (KOOVID-19)’n qabamtanii ta’ee maal akka gochuu qabdan – What to do if you’ve tested positive for coronavirus (COVID-19) (PDF)
Coronavirus (COVID-19) laalamuun yeroo hin fudhatu, miidhaa hin qabu, saphlaa – Coronavirus (COVID-19) testing is quick, safe and easy (Word)
Coronavirus (COVID-19) laalamuun yeroo hin fudhatu, miidhaa hin qabu, saphlaa – Coronavirus (COVID-19) testing is quick, safe and easy (PDF)
Balaa vaayirasiikoronaa (KOOVID-19) keessan hir’isaa – Reduce your risk of coronavirus (COVID-19) poster (Word)
Balaa vaayirasiikoronaa (KOOVID-19) keessan hir’isaa – Reduce your risk of coronavirus (COVID-19) poster (PDF)
Kafaltii Hojii Hafuu Dhibee Daddabraa $1500 – $1500 Pandemic Leave Disaster Payment (Word)
Deeggarsa $450 qorannoo Vaayirasii Koronaa (COVID-19)’f kennamu – $450 Coronavirus (COVID-19) testing support (Word)
Tajaajila si barbaachisu akka itti argattu – Factsheet – How to access the services you need (Word)
Gargaarsa gajahumsa (jeequmsa) maatii – araddaa manooma ummataa (public housing) – Family violence support – public housing estates (Word)
Akkaataa maaskiin fuulaa itti uffatamu – How to wear a face mask – Oromo (Word)
Akkaataa maaskiin fuulaa itti uffatamu – How to wear a face mask – Oromo (PDF)
Akkaataa maaskiin huccuu ittiin hojjetamu – Design and preparation of cloth mask – Oromo (PDF)
Akkaataa maaskiin huccuu ittiin hojjetamu – Design and preparation of cloth mask – Oromo (Word)